Why Design is Important for Business Myanmar | Zeagwat, Inc.
ဘာလို့ လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် ဒီဇိုင်းက အရေးကြီးရတာလဲ?
Design က လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက် ဘာလို့အရေးပါတယ်လို့ထင်ရတာပါလဲ။
လူကြီးမင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီနေ့ခေတ်အောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းအများစုမှာဆိုရင် ဒီဇိုင်းကောင်း
ကောင်း နဲ့ logo ကောင်းကောင်းတွေကို အသုံးပြုထားတာကို တွေ့မြင်နေကြမှာပါ။
ဒါကြောင့်မို့ မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေ Design နဲ့ပက်သက်တဲ့ knowledge တချို့ကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ဒီဇိုင်းမပါတဲ့ နေရာဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်အသုံးပြုနေရတဲ့ ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေမှာပါ ဒီဇိုင်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကို လူကြီးမင်းတို့ သတိပြုမိပါသလား?
ဒီဇိုင်းဆိုတာ မိမိလုပ်ငန်း (သို့) မိမိထုတ်ကုန်ရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ ဒီဇိုင်းကောင်းတယ်ဆိုလိုတာက မိမိလုပ်ငန်း (သို့) ထုတ်ကုန်ရဲ့ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်မှု နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများကို ဝယ်ယူမည့် Customer များအား တိုက်ရိုက်ပြသနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်းတစ်ခုက လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုများ ထင်ဟပ်ပြသနေသလိုမျိုးပဲ မကောင်းမွန်တဲ့ ဒီဇိုင်းတစ်ခုကတော့ သင့်လုပ်ငန်း ဘယ်လောက်အောင်မြင်နေပါစေ Customer များ၏ First Impression ကို များစွာကျဆင်းစေနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ အနေဖြင့် ဆိုကြပါစို့…. အောက်တွင်ပြထားသော ပစ္စည်း နှစ်မျိုး၏ ပုံကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ… ယခုစာဖတ်နေသူရော ဘယ်ပစ္စည်းကို ဝယ်ချင်စိတ်ပိုဖြစ်မိပါလဲ? တစ်နည်းအားဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုက ဘယ်ပစ္စည်းအပေါ်တွင် ပိုမိုရှိပါသလဲ?
ဘယ်ဘက်က ပုံဟာ သင့်အတွက် စွဲဆောင်မှုပိုမိုရှိစေတဲ့လို့ ထင်မြင်တယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ဒီဇိုင်းရဲ့ အရေးပါမှုကို နားလည်နေသူတစ်ယောက်ဟု ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်။ ညာဘက်ကပုံကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ ယခု ကျွန်တော်တို့ ရှင်းပြမယ့် အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုပြီး ဖတ်ရှုသင့်နေပါပြီ….
သင်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဝတ်အစားလှလှလေးတွေရွေးပြီးဝတ်ဆင့်သလို့မျိုးသင့်ရဲ့လုပ်ငန်း product အတွက် Design လှလှလေးတွေလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူးလား။ ယနေ့ခေတ်ဒီဇိုင်းကဘာလို့အရေးကြီးတာလည်းဆိုရင်လူအများစုက productရဲ့quality ကိုသာမက product ရဲ့designကိုပါ အရေးစိုက်လာကြတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Branded Design ဆိုတာကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာပါပြီ။ ဥပမာပြောရရင် Electronic ပစ္စည်းတွေ၊ mobile device တွေကို၀ယ်မယ်ဆိုပါစို… ဒီဇိုင်းကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းဟာ လူကြိုက်ပိုများတာကို သင်သတိပြုမိပါသလား?
Mobile device တွေထဲမှာဆို Apple တို့ ၊ Samsaung အစရှိတဲ့ဈေးကွက်မှာနေရာယူထားတဲ့ Device တွေပေါ့။
ဒီအချက်တွေကြောင့် designဆိုတာ ကလည်းသင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းပါပဲ။
ဒီလိုဒီဇိုင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်လို့ (သို့) လုပ်ဖို့အချိန်မရလို လုပ်ငန်းတွေ ဆုံးရှုံးခံနေရတာကို သတိထားကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအချက်တွေပါဝင်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ Design ကောင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ Zeagwat က ရေးဆွဲပေးနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရနိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွေက –
⦁ လုပ်ငန်းအမှတ်တံဆိပ် Logo ဒီဇိုင်များ
⦁ Social Media အတွက် Graphic Design များ, Website အတွက် ဒီဇိုင်းများ
⦁ အင်္ကျီတံဆိပ် logo ဒီဇိုင်းများ
⦁ Business Card, Pamphlets,စသည့်ဒီဇိုင်းများ စတဲ့ Graphic Design နဲ့ ပတ်သတ်တာ အားလုံးကို သင့်တင့်မျှတတဲ့ နှုန်းထားနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ရေးဆွဲပေးနေပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းအတွက် ဒီဇိုင်းလှလှတွေ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Zeagwat နဲ့ ဆယ်သွယ်လိုက်ပါ……………………..
ဖုန်းနံပါတ် – 09770126660 | အီးမေးလ် – sales@zeagwat.com